Musharax Jebiye oo $5000 ugu deeqay ciidanka Kastamka Tuur-dibi ee Galdogob
Musharaxa Madaxweynaha Puntlnd ee doorashada 2019 Maxamuud Khaliif Xassan Jebiye oo booqasho ku joga magaalada Galdogob ee galbeedka gobolka Mudug ayaa booqasho ku tegey kastamka Tuur-dibi ee loogu tala galay in lagu qaado cashuuraha alaabaha isaga gudbaya labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya.
Maamulka kastamka Tuur-dibi ayaa musharaxa warbixin ka siiyey xaaladda shaqo ee Kastamka. Maamulka ayaa sheegay in ay in badan kala mid yihiin ciidanka ilaalada cashuuraha ee aan qudhoodu helin xuquuqdoodi.
Musharax Maxamuud Khalif ayaa sheegay in kastamka Tuur-dibi haddii u si fiican u shaqeyn lahaa uu noqon lahaa mid kamid ah kuwa ugu muhimsan ee dalku llee yahay, magalada Galdobna ay noqon lahayd mid ka duwan magaalooyinka kale, wuxuu ballan qaadey in Kastamkan uu siin doono muhimad gaar ah.
Musharax Jebiye ayaa ciidanka ilaalada Kastamka Tuur-dibi ugu deeqay (Shan kun)
$5 000 oo dollarka Maraykanka ah, taas oo wax ka taraysa gunnooyinka iyo mushaharaadka ka maqan ciidanka.